जितमा अहंकार गर्नु अशोभनिय हुन्छ कमरेड ! - Muldhar Post
जितमा अहंकार गर्नु अशोभनिय हुन्छ कमरेड !
अमित ढकाल २०७४, ४ पुष मंगलवार 437 पटक हेरिएको
प्रिय अध्यक्ष कमरेड केपी ओली ज्यू,
यो लेखको विषय भने अर्कै छ। अहिले राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएको असहज परिस्थितिमा तपाईं र तपाईंको पार्टीको भूमिकाबारे केही लेख्दैछु।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई साँच्चै नै यो कानुनको संवैधानिकतामाथि शंका थियो भने त्यतिबेलै फर्काउनुपर्थ्यो। परम्परा त्यही थियो। अहिले भइरहेको बहस त्यहीबेला हुन्थ्यो। एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणालीबारे अज्ञानता त्यही बेला हट्थ्यो। पार्टीहरुको हठ सेलाउने समय मिल्थ्यो। समयमै भूल सुधार्ने मौका पाउँथे।
आम नागरिकको आकांक्षा सम्बोधन गर्न तपाईं चाँडै केन्द्रित हुन सक्नुहोस्, लाख शुभकामना छ। अमित ढकालले सेतोपाटीको लागि लेखेका हुन ।